Ukuqhekeka kwamagxa kuBantwana
Yintoni ukwaphuka kwamagxa?
Ukuqhekeka kwegxalaba kukophuka kwithambo lamagxa. Amathambo egxa afaka ihumerus (ithambo lengalo), iscapula (igxalaba) kunye neclavicle (ikhola yomqala).
Ziintoni iimpawu kunye neempawu zokwaphuka kwamagxa?
Intlungu kunye nokudumba
Utshintsho kubume begxalaba lomntwana wakho okanye ibump ecaleni kwegxalaba
Ingxolo yokusila okanye yokuqhekeka xa umntwana wakho ehambisa igxalaba okanye ingalo
Ukuba ndindisholo okanye ukurhawuzelela ingalo yomntwana wakho, isandla sakhe okanye iminwe yakhe
Ufumanisa njani kwaye unyangwa njani ukwaphuka kwamagxa?
Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kumvavanya. Iifoto ze-X-ray ziya kubonisa indawo eyaphuke kuyo nokuba inzima kangakanani. Unyango luya kuxhomekeka kubudala bomntwana wakho, indawo aqhekeke kuyo, nokuba uqhekeka kangakanani na. Kungathatha iiveki ezininzi ukuba umntwana wakho aphuke. Umntwana wakho unokufuna oku kulandelayo:
ishedyuli 2 izinto ezilawulwayo
Iyeza lokunyanga iintlungu inokunikwa. Buza umboneleli wezempilo womntwana wakho ukuba ulinika njani eli chiza ngokukhuselekileyo. Amanye amayeza entlungu anee-acetaminophen. Musa ukunika umntwana wakho amanye amayeza aqukethe i-acetaminophen ngaphandle kokuthetha nomboneleli wezempilo. I-acetaminophen eninzi inokubangela ukulimala kwesibindi. Iyeza lentlungu linokubangela ukuqunjelwa. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba angakuthintela okanye ukunyanga njani ukuqhina.
Isilingi okanye ibhandeji ebhetyebhetye inokusetyenziselwa ukuthintela igxalaba lomntwana wakho ekuhambeni. Oku kuyakugcina amathambo omntwana wakho kunye kwaye ubaphilise. Rhoqo, isamente inokusetyenziselwa ukubamba amathambo omntwana wakho ngokudibeneyo.
Ukuncitshiswa okuvaliweyo kwenzelwe ukubuyisela amathambo omntwana wakho kwindawo efanelekileyo ngaphandle kotyando.
Ugqirha kwenzelwe ukubuyisela amathambo omntwana wakho kwindawo efanelekileyo. Izikhonkwane, izikrufu, okanye iipleyiti zesinyithi zingasetyenziselwa ukunceda ukubamba amathambo omntwana wakho kunye.
Ndingazilawula njani iimpawu zomntwana wam?
Sebenzisa isilingi okanye i-bandage elastic ukuthintela intshukumo njengoko kuyalelwe. Endaweni yoko, umboneleli wezempilo womntwana wakho angakubonisa indlela yokufaka umnwe womntwana wakho esifubeni sakhe. Susa kuphela isilingi, ibhandeji, okanye ipini ukuhlamba okanye ukunxiba umntwana wakho.
Faka umkhenkce egxalabeni lomntwana wakho kangangemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 ngeyure nganye okanye njengoko kuyalelwe. Sebenzisa ipakethe yomkhenkce, okanye ubeke umkhenkce otyunyuziweyo engxoweni yeplastiki. Yimboze ngetawuli ngaphambi kokuba uyisebenzise kulusu lomntwana wakho. Umkhenkce unceda ukuthintela ukonakala kwethishyu kunye nokunciphisa ukudumba kunye nentlungu.
Yenza umntwana wakho aphumle igxalaba lakhe ngokukhawuleza ngokungxamisekile. Musa ukuvumela umntwana wakho abeke uxinzelelo egxalabeni okanye engalweni yakhe. Sukuvumela umntwana wakho asebenzise ingalo ukuphakamisa nantoni na. Musa ukuvumela umntwana wakho ukuba enze izinto ezinokubangela enye ingozi. Imizekelo ibandakanya imidlalo, ukukhwela ibhayisekile, okanye ukudlala ebaleni lokudlala. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba angabuyela nini kwimisebenzi yesiqhelo.
Mphathe kakuhle umntwana wakho ukuthintela ukwenzakala okungakumbi. Ngenisa ngobunono usana lwakho okanye umntwana omncinci. Musa ukuthatha umntwana wakho okanye umntwana ngengalo.
Thatha umntwana wakho kunyango lomzimba njengoko kuyalelwe. Ingcali yonyango ifundisa ukuzilolonga komntwana wakho ekuncedeni ukuphucula intshukumo kunye namandla, kunye nokunciphisa iintlungu.
Ndinganceda njani ukuthintela ukwenzakala kwamagxa?
Yithi umntwana wakho anxibe izixhobo zemidlalo zokuzikhusela ezifanelekileyo ngokufanelekileyo. Imizekelo ibandakanya iiphedi zamagxa kunye nesikhuselo sesifuba.
Yondla ukutya komntwana wakho okunekhalsiyam eninzi. Imizekelo ibandakanya ubisi, itshizi, kunye neyogathi. I-calcium inceda ukugcina amathambo omntwana wakho omelele.
Intlungu yomntwana wakho iya isiba mandundu, nasemva kokuba ephumle kwaye esela amayeza eentlungu.
Ingalo, isandla, okanye iminwe yomntwana wakho ingathi iba ndindisholo okanye iyabanda kwaye ijongeka iluthuthu.
Ingalo yomntwana wakho idumbile, ibomvu, kwaye uziva ushushu.
Umntwana wakho akakwazi ukusishukumisa isandla sakhe okanye iminwe.
Umntwana wakho unefiva okanye ubanda.
Ukuqhekeka komntwana wakho kuyonakala.
Unemibuzo okanye inkxalabo malunga nemeko yomntwana wakho okanye ukhathalelo.
indlela yokwenza i-portal ephantsi
ukuthatha i-oxycodone kwi-suboxone
I-zolpidem tartrate 10 mg ithebhulethi
ILorzone 750 mg ithebhulethi